भीभोले ल्यायो नयाँ स्मार्टफोन, भी १५ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
भीभोले ल्यायो नयाँ स्मार्टफोन, भी १५ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक
डिसी नेपाल , २४ फाल्गुन २०७५
काठमाडौं । भीभोले आज आफ्नो भी सिरिजको नयाँ स्मार्टफोन भी १५ प्रो नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको छ।
भीभो भी १५ प्रो पहिलो मोडल हो। जसमा भीभो नेक्सपछि यस उद्योगकै पहिलो एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामरा प्रयोग गरिएको छ। जसमा ग्राहकहरुको आवश्यकताअनुसार आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरिएको छ भने इन्टेलिजेन्स पर्सनल असिस्ट्यान्टका साथमा फूल स्क्रीन स्मार्टफोन ल्याएको हो।
भीभोले पुनः एक पटक एलेभेटिंग क्यामरा ल्याएर यसअघिको मान्यताभन्दा अगाडि बढेको छ जसले मोबाइलको अनुभवलाई उत्कृष्ट बनाउँछ। भी सिरिजमा उच्च स्तरका प्रविधिहरु तथा फीचरहरु राखिएको छ, जसले फोनलाई प्रिमियम फोनको अनुभव दिन्छ।
एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामराका अतिरिक्त भी १५ प्रोमा एआई ट्रिपल क्यामरा सेटअप रहेको छ, जसले व्यवसायीक फोटोग्राफीका लागि माथिल्लो तहको अनुभव दिन्छ भने यसका साथमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिंग समेत राखिएको छ।
‘आविष्कार हाम्रो प्रमुख मूल्य हो। उद्योगकै पहिलो एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामराले फोनमा बेजेललेस डिस्प्ले प्रदान गरेको छ। हामी सँधै गेम चेन्जिंग फीचहरु ल्याउन प्रयासरत छौं, जसमा उच्च गुणस्तरको क्यामराहरु, स्मार्टर एआई सर्भिसेज लगायतले मोबाइल अनुभवलाई नयाँ आयाम प्रदान गर्दछ,’ भीभो नेपालका ब्राण्ड प्रमुख पेङ्गदाले भने, ‘भीभो भी १५ प्रो ग्राहकहरुको दैनिक जिवनलाई सहज बनाउन ल्याएको प्रडक्टको हामीले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको उदाहरण हो।’
एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामराका साथमा ठूलो साइजको डिस्प्ले भीभो भी१५प्रोमा ठूलो डिस्प्ले रहेको छ जसलाई एलेभेटिंग फ्रन्ट क्यामराले गर्दा सहज बनाएको हो।
यो स्मार्टफोनमा सेल्फीका लागि ३२ मेगापिक्सेलको फ्रन्ट क्यामरा राखिएको छ। एलेभेटिंग क्यामरा पहिलो पटक मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा पहिलो पटक नेक्समा प्रदर्शीत गरिएको थियो। भीभो भी १५ प्रोमा ९१.६४ प्रतिशत स्क्रीन टू बडि रेसियो रहेको छ जसले गेमिंग र भिडियो हेर्नका लागि सहजता प्रदान गर्दछ।
यसमा ६.३९ इन्चको सूपर एमोलेड अल्ट्रा फूलभ्यू डिस्प्ले प्रयोग गरिएको छ, जसमा १९.५ः९ एस्पेक्ट रेसियो रहेको छ। ट्रिपल रियर क्यामरा एआई ट्रिपल क्यामराका साथमा भी १५ प्रोद्धारा उत्कृष्ट फोटो खिच्न सकिन्छ। भीभो भी १५ प्रोमा स्पष्ट र गुणस्तरीय फोटो खिच्नका लागि एआईका साथमा ट्रिपल क्यामरा राखिएको छ।
जून यसमा भएको ४८ मिलियन क्वाड पिक्सेल सेन्सरका कारणले सफल भएको हो। यसका साथै ८ मेगापिक्सेलको वाईड एंगल र ५ मेगापिक्सेलको डेप्थ क्यामरा रहेको छ। फोर ईन वान पिक्सेल प्रविधि राखिएको मुख्य क्यामराले उच्च गुणस्तरको १२ मेगापिक्सेलको फोटो खिच्न सक्दछ भने अँध्यारो अवस्थामा पनि उत्कृष्ट फोटो खिच्न सकिन्छ। यसको वाईड एंगर क्यामराले १२० डिग्रीसम्मको फोटो खिच्न सकिने बनाएकोछ।
फोटोग्राफीका लागि यसमा एआई फेस ब्यूटि, एआई पोर्टेट फ्रेमिंग जस्ता फीचर छन्। अल न्यू एआई सूपर नाइट मोडले रातीको समयमा लिईने फोटोहरु ट्राइपोड बिना नै डिएसएलआरको जस्तै गुणस्तरमा खिच्न सकिन्छ। यसले गर्दा फरक एक्सपोजरमा पनि अनेकौं फोटोहरु लिन सकिन्छ। यसमा एआई बडि सेपिंग फीचर पनि राखिएकोछ।
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिंग प्रविधि भी भो भी १५ प्रोमा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानिंग प्रविधि प्रयोग गरिएको छ, जून यसको पाचाँै पुस्ताको नविनतम प्रविधि हो। अधिकतम फिंगरप्रिन्ट पिक्सेल डेन्सिटी र सोफिस्टिकेटेड अल्गोरिदमकाका साथमा यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई थप सुरक्षा र सहजताका साथ आफ्नो फोनहरु अनलक गर्न सहयोगी हुन्छ।
भीभोको एआई प्रविधि शक्तिशाली जोभीका साथमा अझ अगाडि बढेको छ। यो पर्सनल असिस्ट्यान्टले तपाईको आवश्यकता र चाहनालाई बुझेर सहयोग गर्दछ। नविनतम प्रविधिका साथमा नयाँ फीचरहरु एआई पावर अन गर्नका लागि भी १५ प्रोको साइडमा भएको नयाँ स्मार्ट बटन प्रयोग गरे पुग्छ।
एक क्लिकमा गूगल असिस्ट्यान्ट, दुई क्लिकमा जोभी इमेज रिकोग्नाइजर प्रयोग गर्न सकिन्छ। भी १५ प्रोमा गुगलसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको भ्वाइस कमाण्ड पनि राखिएको छ जसले तपाईँको आवश्यकताअनुसारको जवाफ दिन्छ। यसका साथै एआई फेस ब्यूटी, फोन मेमोरी क्लिनअप, खोजी लगायतका कार्य कमाण्डबाटै नै गर्न सकिन्छ।
गेम मोड ५.० भी १५ प्रोमा भएको अपग्रेड गरिएको गेम मोड ५.० लाई गेमरहरुले मनपराउने छन्। यसमा कम्पिटिसन मोड राखिएको छ, जसले गेम परफर्मेन्सका लागि ड्यूल टर्बोका साथमा फोनको सिस्टम छुट्याउँछ, जसले गर्दा सहज रुपमा गेम खेल्न सकिन्छ।
भीभो भी १५ प्रोमा क्वालकम स्न्यापड्रागन ६७५ एआई अक्टा कोर प्रोसेसर राखिएको छ। यो फोन ६जीबी र ८ जीबी र्याम अप्सनमा आउँछ भने यसको आन्तरिक स्टोरेज १२८ जीबी रहेको छ। यसमा भएको ड्यूल इन्जिन फास्ट चार्जिङ्ग टेक्नोलोजीका साथमा प्रयोगकर्ताहरुले केबल १५ मिनेटमा एक चौथाई चार्ज गर्न सकिने हुँदा चार्जींगको समस्या हुनेछैन्।
उपलब्धता भीभो भी १५ प्रो नेपाली बजारमा टोपाज ब्लू कलर अप्सनमा उपलब्ध छ, जसको हाल प्रिअर्डर फागुन २४ गतेदेखि शुरु हुनेछ। यो स्मार्टफोनको अधिकतम बजार मूल्य ५२,४९० रुपैयाँ तोकिएको छ।